Arday badan oo macallinimo barata oo ka harta waxbarashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulliyadda macallinimada ee Stockholm. Sawirle: Ekot
Arday badan oo macallinimo barata oo ka harta waxbarashada
La daabacay tisdag 12 november 2013 kl 14.25
Habkii waxbarashada macallimiinta oo bilowdey laba sano ka hor ayaa la filayey in yareeyo ardayda isaga harta waxbarashada, laakiin sidaas ma aysan noqon, sida u cad daraasad ay idaacadda telefishanka ee SVT.
Ardaydii bilowdey tacliinta macaallinimada dayrtii 2012, waxaa tacliintii ka haray tiro kor u dhaaftay boqolkiiba 15 intii uusan xilligii waxbarashadu dhammaan. Tiradaasina waxay u dhigantaa 1300 oo qof, waana tiro ka badan tii sannadkii 2010, oo ahaa sannadkii ugu dambeeyey oo la isticmaalo habkii waxbarashada macallimiinta. Xilligaas waxaa waxbarashada ka hari jirey siddeeddii ardayba mid ama in kor u dhaaftay boqolkiiba 12 marka ay dhigtaan hal xilli waxbarasho. Sidaasna waxaa lagu muujiyey daraasad lagu daabacay wargeyska Lärarnas tidning oo ah wargeyska Ururka macallimiinta.
Josefin Kärf oo guddoomiye ka ah Sektion Lära oo hoos taga ururka ardayda jaamacadda Uppsala. Dhibaato ayeyna u aragtaa ardaydaas waxbarashada ka hareysa maadaama mustaqbalka loo baahnaan doono barayaal badan. Waxay ardaydaas waxbarashada ka hareysa u sababeyneysaa in uu meesha ka maqan yahay dareen ardayda dhiirrigeliya.
Haddaba si ay arday badani u xiiseeyaan in ay doortaan xirfadda macallinimo waa in wax laga beddelaa aragtida laga haysto iyo sida loo la dhaqmo macallimiinta, ayey Josefin Kärf intaas ku raacisey. Waxay kaloo intaas ku dartay in tayada waxbarashada cusub ee macallimiinta la sugo.
- Waxaan qabaa in la gaarey waqtigii aan dowladda ka dalban lahayd sidii waxbarashadaan loogu qiimeyn lahaa heer dowladeed.
Qoraal sanndkii 2011 ay soo saartay wakaaladda waxbarashada jaamacadaha waxaa lagu muujiyey in ardayda jaamacadaha dhigta ay boqolkiiba toban ka haraan waxbarashada marka ay hal xilli dhigtaan.